कोरोना भाइरसको तथ्यांक लुकाएको आरोप किन लाग्छ चीनलाई?
एजेन्सी बुधबार, चैत २६, २०७६, १९:३७
एजेन्सी- कोरोना भाइरस संक्रमण शुरु भएको चीनलाई पटक पटक तथ्यांक लुकाएको आरोप लगाउने गरिन्छ। वुहान शहरबाट शुरु भएको कोरोना संक्रमण सुरु भएदेखि हालसम्मका तथ्यांकमा विश्वास गर्न नसकिने भनी किन प्रश्न उठाइन्छ त? बिबिसीका संवाददाता रोबिन ब्यटले यी र यस्तै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छन्।
कयौं महिनादेखि बिहान तीन बजे चीनका अधिकारीले कोरोना भाइरससम्बन्धी आँकडा जारी गर्ने गर्दथे। सबैलाई चीनमा भएका संक्रमितको बारेमा स्पष्ट जानकारी होस् भनी बिहानै उनीहरुले यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए। ७ अप्रिलसम्म चीनमा ८१ हजार ७ सय ४० संक्रमित भएका थिए भने ३ हजार ३ सय ३१ को ज्यान गएको छ।
कोरोना जसरी चीनबाट शुरु भयो त्यसैगरी यसलाई नियन्त्रण गर्न उसले गरेको कामको प्रशंसा भइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस ऐडहेनोम गेब्रीयेसोसले चीनको प्रयासको प्रशंसा गर्दै चीनले समयमै यसको पत्ता लगाएर महामारी रोक्न तथा तथ्यांकमा पारदर्शीता कायम गरेको बताए।
डब्लुएचओले यस्तो प्रशंसा गरेपनि लगातार चीनको तथ्यांकमा प्रश्न भने उठिरहेको छ। गत साता बेलायतका वरिष्ठ मन्त्री माइकल गोभले चीनको तथ्यांकमा विश्वास गर्न नसकिने टिप्पणी गरे।
‘चीनसँग जोडिएको केही रिर्पोटहरु स्पष्ट छैनन्, जस्तो यो कुन स्तरसम्म फैलियो र यसको प्रकृति के हो?’ मन्त्री गोभले प्रश्न उठाए। अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि गत साता चीनले सार्वजनिक गरेको संक्रमित र मृतकको तथ्यांकमा शंका व्यक्त गर्दै कमीमात्र बाहिर आएको हुनसक्ने बताए।
अमेरिकी नेताहरुले यसअघिदेखि नै चीनले संक्रमित र मृतकको संख्या लुकाउँदै आएको आरोप पटक पटक लगाउदै आएका छन्। जब जब विश्वभर कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या वृद्धि हुदै गयो अनि चीनको तथ्यांकमाथि झन् प्रश्न उठाउन थालियो। संक्रमण र मृतकको तथ्यांक हेर्दा पहिले अमेरिकाले चीनलाई उछिन्यो।
त्यस्तै इटाली, स्पेन, फ्रान्स र जर्मनी अहिले चीनभन्दा अगाडि पुगेका छन्। बेलायत र इरान तिनको नजिकै रहेका छन्। जुन जुन देशमा फैलिएको छ त्यहाँ तीव्र रुपमा फैलँदा चीनको तथ्यांकमा उनीहरु विश्वास गर्न सकेको देखिँदैन जसका कारण उसमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
हालै हुबे प्रान्त जहाँबाट कोरोना भाइरस शुरु भयो त्यहाँका शीर्ष कम्युनिस्ट पार्टी नेता यिंग योङ्गले अधिकारीहरुलाई गल्ती नगर्न र सही तथ्यांक सार्वजनिक गरिराख्न आग्रह गरे। २०१९ डिसेम्बरमा हुबे प्रान्तको वुहानबाट्द कोरोना फैलन शुरु भएको थियो। चीनले शुरुवाती अवस्थामा कोरोना भाइरसको असर, गम्भीरतालाई भने लुकाएको थियो। वुहानका मेयरले नै उक्त शहरमा धेरै पहिला कोरोना भाइरस फैलिएको बताएका थिए।
जनवरीको शुरुवातीमा यहाँ कोरोना भाइरसका १०० बिरामी भएको दाबी उसले गरेको थियो। २३ जनवरीसम्म मेयरले शहरलाई लकडाउन गर्न माग गरेका थिए। यस बीचमा केही सहर लकडाउन भएको थियो। चीनले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई ३१ डिसेम्बरमा मात्र जानकारी दिएको थियो। सोही समयमा वुहानका एक डाक्टरले आफ्ना सहकर्मीलाई सार्सजस्तै एक महामारी फैलिएको बताएका थिए।
उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर सोधपुछ समेत गरेको थियो। पछि उनी कोरोना भाइरसका कारण नै मृत्यु भएको थियो। केही महिनाअघि राष्ट्रपति सि सिनपिङ वुहान पुगेका थिए। कोरोना संक्रमणपछि उनको यो पहिलो भ्रमण थियो। कोरोना संक्रमण हुवे प्रान्तभन्दा अर्कोमा फैलिएको थिएन।